Ciidan gadoodsan oo go'doomiyay Madaxtooyadda | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidan gadoodsan oo go’doomiyay Madaxtooyadda
Askarta qaar oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in mudo 3 bilood ah aysan helin wax mushahaar ah, iyagoo ku eedeeyay taliska NISA inuu musuq-maasuqay lacagta xaqooda ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - In ka badan 100 askari oo katirsan Hay'adda Nabad Sugida iyo Sirdonka Soomaaliya ee NISA ayaa maanta go'doomiyay Villa Soomaaliya, iyagoo ka xirtay jidadkii galayay mudo saacado ah.
Ciidamada ayaa ka gadooday Mushahaar la'aan mudo saddex billood ah, waxayna sheegeen inay kasoo baxeen saldhigii ay ku jireen oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha degmada Deyniile ee gobolka Banaadir, halkaasoo ay cadowga Al-Shabaab kula dagaalamayeen.
Waxay jidka Daljirka Dahsoon ku gooyeen gaadiidka dagaalka, iyagoo diiday in gaadiidka u gudbaan dhanka Madaxtooyadda, oo ay ku sugan yihiin Madaxweyne Farmaajo, taliyaha NISA Fahad Yaasiin iyo gudoonka Baarlamaanka.
"Waxaan xuquuq la'aan nahay saddex bilood, oo aan ku sugnayn Garoonka Deyniile oo nala dejiyay bishii lixaad [June], saddex bilood kadib waxaa nalagu yiri wax mushahaar la adinma hayo, ee guryihiina aada," ayuu yiri mid kamida askarta.
Mareykanka ayaa bixiya mushahaarka Ciidamada katirsan NISA, oo ah unug Sirdoonka ka shaqeeya, islamarkaana tababar askartiisa ku qaata Eritrea iyo dalal kale, iyadoo markii uu Fahad Yaasiin la wareegay taliska hay'adda 2018 ka dhigay xarun Al-Shabaab.
Ma ahan markii ugu horeysay oo Ciidan ka cabanaya Mushahaar la'aan ay xirtaan wadooyinka Muqdisho, oo waxay soo socotay tan iyo doorashadii Farmaajo 2017, waxaana Mareykanka oo Dec. 2017 joojiyay taageeradii Militeriga kadib markii uu ogaaday in madaxdooda ay musuq-maasuqaan wixii loogu tala-galay.
Wuxuu Ra'iisul Wasaaraha ku tilmaamay dilka Mas'uulkan mid nasiib darro ah